Ahiana horavana noho ny tetikasam-panarenana ny tanànan’ny mpanjono sy ny ala honko iray ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jona 2018 16:56 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Español, 日本語, English
Ny lahatsoratra dia avy amin'i Leon Dulce ao amin'ny Kodao, tranonkalam-baovao mahaleotena iray ao Filipina, ary navoaka eto amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Manana sanda lehibe amin'ny maha-mpitahiry tontolo voajanahary azy ireny fefy maitso manamorona ny ranomasina ireny. Nefa dia nankatoa ilay tetikasam-panarenana ny Fahefana Fampandrosoana Ara-Toekarena Nasionaly (NEDA), sampan-draharaha voalohany misahana izany na dia mifanohitra amin'ny fomba fijeriny aza izany.
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2018 ihany koa no nosoniavin’ny governemanta Duterte ny fifanaraham-piarahamiasa amin'ny governemanta holandey amin'ny famolavolana Drafitrasa Fampandrosoana Lovainjafy ao amin'ny Helodranon'i Manila (MBSDMP). Ny sarety indray anefa no alohan'ny omby, amin'ny fisian'ny tetikasa tahaka ny aerotropolis izay mandroso haingana dia haingana tsy misy fitarihan'ny lasitra fitantanana sy fampandrosoana lovainjafy amin'ny ankapobeny.
Efa ho 30.000 hekitara amin'ny tetikasa amin'izao fotoana izao no mandrakitra ny manamorona ny oala.
Niditra lalina dia lalina miaraka amin'ireo fokonolona ny vondrona ara-tontolo iainana sy ny fiangonana amin'ny tolona fanavotana an'i Taliptip sy ireo fokonolona hafa manerana ny Oalan'i Manila. Hijoro hiaraka amin'ny vahoaka ve i Duterte ary mbola hifikitra amin'ny fomba fiteniny hanohitra ny fanarenana, sa mbola hiankohoka amin'ny didin'ny tombontsoan'ny fihariana goavana indray?
Leon Dulce no mpandrindra nasionalin'ny Tambajotran'ny vahoaka Kalikasan ho fiarovana ny Tontolo Iainana. Zohio ao amin'ny Facebook ny tolona ifotony ataon'ny vahoaka hanavotana an'i Taliptip, na zohio amin'ny alalan'ny tenirohy (farangonteny) #SaveTaliptip ao amin'ny Twitter.